Hevitra 12 hanavahana ny varotra atiny | Martech Zone
Hevitra 12 hanavahana ny varotra atiny
Alahady, Novambra 22, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Tiako ny zava-misy fa mijanona miaraka amintsika ireo mpamaky antsika na dia tsy dia mamorona loatra aza isika. Ny famolavolana sy famoahana infografika iray taonina dia manampy amin'ny fanavahana ny famoahana azy amin'ny olon-kafa any - saingy tsy nihoatra lavitra an'izay. Our andian-dahatsoratra podcast fanadihadiana miaraka amin'ny mpitarika marketing dia ezaka iray.
Ny ankamaroan'ny antony ifikirantsika amin'ny atiny fohy momba ny lahatsoratra dia avy amin'ny fomba fijery mahomby fotsiny. Manana lohahevitra taonina maro hanoratana izahay fa tsy loharano be loatra. Ity infographic avy any Oracle ity dia mitaona ahy hanana famoronana bebe kokoa. The infographic, Hevitra fampiroboroboana atiny 12 mahafinaritra (Izay tsy bilaogy Lahatsoratra), manome torohevitra tsara momba ny fanovana ny atiny.
quiz - Soraty ho toy ny quiz ny atiny.
Twitter - Avoahy ao anaty Twitter ny atiny.
tabilao - Mampiavaka ny atiny amin'ny tabilao tokana.
Case Study - Asongadino ny mpanjifa ary zarao ny fandinihana tranga iray.
Comic Strip - Soraty amin'ny atiny azo zaraina mora foana ny atiny.
Hafatra an-tsoratra - Mangataha fanadihadiana amin'ny alàlan'ny SMS ary zarao ny valiny.
Series - Manorata andian-dahatsoratra maro fizarana mba hiverenan'ireo olona.
Share - Manaova curate ary mizara atiny amin'ny tranonkala votoaty sosialy toy ny Pinterest.
Interviews - Mampiasà endrika dinidinika ary zarao ny valintenin'ny manam-pahaizana ..
mahazatra - Andramo ny fomba isan-karazany, ny totozy ary ny endrika fampifandraisana mba hampidirana ireo mpamaky.
Glossary - Manorata torolàlana na glosary (ary tazomy hatrany!).
Tianay koa ny mizara raki-peo, horonan-tsary, fanaovana topy maso ireo taratasy fotsy, ary - mazava ho azy - infografika. Inona avy ireo hevitra momba ny varotra atiny efa nozahanao andrana izay niasa tsara? Aza misalasala manome hevitra sy mizara!
Tags: tranga fanadihadianatabilaosary an-tsaryhevitra momba ny votoatyhevitra marketing amin'ny atinyandiana atinytorohevitra atinyRakibolanahitarikaresadresakaPinterestquizandian-dahatsoratraanjarahafatra an-tsoratraTwittermahazatra
Filestage: Atsaharo ny fizotran'ny horonan-tsary sy ny fizotranao
Azuqua: esory ny siloo ary ampifandraiso ny Cloud sy SaaS Applications